Phupha ngeSabelo Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Uninzi lwabantu lwahlulwe kwisitokhwe. Okokuqala, banokukhokelela kwinzuzo enkulu yezemali kunye nempumelelo. Kwelinye icala, ukutyala imali kwizitokhwe nako kuyingozi. Bafuna intelekelelo eninzi kwaye, ngenxa yesi sizathu, abaninzi bayaziphepha.
Kuyafana namaphupha apho amanyathelo adlala indima. Kuxhomekeka kwimeko ethile yephupha, banokutolikwa ngokuqinisekileyo okanye babonakalise into encinci elungileyo kwaye banesilumkiso esingxamisekileyo. Kodwa yintoni kanye kanye enokuthethwa luphawu "lwezenzo"?
1 Isimboli sephupha "izabelo" - ukutolika ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha "izabelo" - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha "izabelo" - ukutolika kokomoya
Isimboli sephupha "izabelo" - ukutolika ngokubanzi
Ngokusisiseko, kwenziwa umahluko kutoliko ngokubanzi lwezabelo ephupheni, nokuba zezabanini, ziyathengwa okanye zithengisiwe.
Intengiso inokuqondwa ngokubanzi njengophawu oluqinisekileyo, kuba amaphupha ngayo ihlala ibandakanya intengiso ye Inzuzo yezemali. Iphupha liya kuba nempumelelo (ngokwasezimalini) ukuba uziphethe kakuhle kwaye ujonge phambili.
Okuchasene kuyinyani ukuba isitokhwe sithengiswa ephupheni, umntu ekuthethwa ngaye utyala imali yakhe kuwo. Kule meko, kuya kufuneka uzive ulunyukisiwe luphawu lokuba lukhulu. ilahleko songela. Unokuthatha umngcipheko omkhulu kwaye ugwebe ubungozi kwimeko ethile.
Ke ngoko, iphupha kufuneka liqondwe njengesicelo esingxamisekileyo sokucinga kwakhona ngokuziphatha kwakho ngokunxulumene nemeko yezemali kwaye uqaphele imali. Ngaphandle koko, kuya kufuneka ukhathazeke kakhulu ngale nto kwaye uzive ungaqinisekanga ngoxinzelelo.
Amaphupha apho kuthengiswa khona izitokhwe nawo axhaphake kakhulu. Ukuze uwatolike la maphupha, kufuneka kwenziwe umahluko ukuba amadangatye ephupheni aqaqambe kwaye abomvu, okanye ukuba umlilo ulawulwa ngumsi omnyama kakhulu. Eyokuqala ithathwa njengophawu lwethemba: le meko yamaphupha ikwazisa ngezezimali mpu melelo y ukungahoywa phakathi. Umsi omnyama, kwelinye icala, ukwangumqondiso welahleko enzima.
Uphawu lwephupha "izabelo" - ukutolikwa kwengqondo
Uninzi lwexesha kutoliko lwengqondo lwamaphupha, iintshukumo luphawu lwenzuzo. umthamo okanye uphawu oluthembisayo lwephupha. Kwakhona, abanye oochwephesha bezengqondo bajonga inqaku lokulangazelela kutyalo-mali lwamaphupha esitokisini. ukhuseleko. Umntu ekuthethwa ngaye uziva ekhathazekile kwaye engakhuselekanga kwimeko ethile okanye imeko kubomi babo bokwenyani.
Ngokwolu toliko, ukuthengiswa okanye ukutshiswa kwezabelo nako kubonisa umnqweno wokungaphezulu ukuzimela. Iphupha elinoloyiko olungaziwayo lokuthandana nabahlobo abazingcayo nabangalunganga.
Uphawu lwephupha "izabelo" - ukutolika kokomoya
Ngokwenkcazo yokomoya yesimboli yephupha "isabelo" le yenye isicelomusa ukuwutyeshela ukhuseleko kwindlela yakho yobomi. Ukulala kunokuphumelela kuphela xa ufunda ukunqanda umngcipheko othile.